Hoyga » Alaabta » Android UHF RFID Tablet VS-C2515
This is an Android 7.1 rugged tablet with abundant functions . With its powerful Qualcomm CPU, 8 inch high-definition screen, 8000mAh battery and comprehensive data capture options like UHF RFID, barcode scanning, HF RFID/NFC, Iris and fingerprint recognition, etc., you can find this easy-to-deploy device a valuable helper to increase productivity in retail, saadka, warehousing, identity verification, meter reading, iwm.
HADII LA XIRIIR
Product Name Kiniiniga RFID
Awood Main battery: Li-ion, rechargeable, 8000mAh
Standby: over 500 saacado
Continuous use: over 10 saacado (depending on user environment
Charging time: 5-7 saacado (with standard AC adaptor and USB cable
Isgaarsiinta interface USB 3.0 Type-C, OTG
A:Waxaan nahay hormood xirfadle Shiine UHF RFID Hardware -saare leh wax ka badan 10 sanado. Waxaan ku suganahay Shenzhen, magaalo u dhow HongKong.
S: Waa maxay alaabta aad samaysato?
A: waxaan awoodnaa inaan soo saarno dhammaan noocyada akhristaha UHF RFID, anteeno iyo tag (u hoggaansamaan borotokoolka EPC C1G2 iyo ISO-18000/6C). waxaan kaa caawin karnaa sidii aad u habayn lahayd dhammaan noocyada akhristaha, anteeno iyo tag.
A: waxaan leenahay faa'iidooyin badan.
marka hore, waxaan diirada saareynay R&D, soo saarid, iibinta iyo hirgelinta akhristaha UHF RFID, Anteenada UHF RFID iyo UHF RFID Tag in ka badan 10 sanado.
Marka labaad, waxaan ku fiicanahay naqshadeynta dhammaan noocyada xalka RFID ee warshadaha ama codsiyada kala duwan.
Saddexaad, alaabtayada waxaa laga iibiyey adduunka oo dhan, waxay u adeegayaan dawladnimo, tafaariiqle weyn, dugsiga, shirkad weyn oo wax soo saar leh iyo shirkad saadka ah iyo sidoo kale maareeyaha gaadiidka/gaadiidka iwm.
Afraad, waxaan leenahay shaqaale xirfad leh RFID, wax soo saar kasta ha ahaadee, cilmi baaris ama injineer ama iibin.
S: Waa maxay nooca macmiilkaagu?
A: Sida soo saaraha qalabka RFID, waxaan caadiyan la shaqeynaa nidaamka nidaamka, bixiyaha xalka ama shirkadda softiweerka IT si toos ah sababta oo ah waxaan siin karnaa qalab iyaga oo horumarin kara softiweerka isla markaana fulin kara/rakibi kara/isku-dari kara qalabka iyo softiweerka adeegsigooda dhammaadka ah.
S: Haddii aan rabo inaan iibsado alaabtaada, maxaan marka hore yeelnaa?
A: maadaama badeecada RFID ay tahay nidaam adag (u baahan tahay horumar dheeraad ah), markaa waxaad u baahan tahay inaad noo sheegto shuruudaha mashruucaaga, tusaale ahaan,
waa maxay shayga la raadraacay?
Waa maxay masaafada akhriska ee loo baahan yahay?
Akhriste noocee ah ayaad rabtaa inaad ku isticmaasho mashruucaaga?
Akhriste go'an ama akhristaha gacanta?
Ka dib markaan caddayno wixii aad u baahan tahay, waxaan kuu soo diri doonaa xog -ururinta iyo oraahda tixraacaaga.
Kadib si fiican u xaqiiji, waxaan kuu soo diri doonnaa PI lacagtii aad nagu bixisay ka dibna waxaan kuu soo diri doonnaa badeecado ASAP markaan helno lacag -bixintaada.
S: Miyaad keentaa software?
A: ma haysanno software maareyn, laakiin waxaan leenahay SDK akhristayaasha si aad u sii wadato is -dhexgalkaaga software -kaaga maareynta ee hadda.
S: Waa maxay waqtiga dhalmadaada?
A: Haddii aan haynno kaydkooda, waqtiga dhalmada waa 1-2 maalmo.
Haddii aynaan haysan kayd ku filan, waqtiga dhalmada ayaa noqon doonta 3-10 maalmo, waxay kuxirantahay cabirka dalabka.
S: Waa maxay caddaynta alaabtaadu leedahay?
A: alaabooyinkayagu waxay leeyihiin shahaadooyinka CE iyo FCC.
S: waa maxay suuqaaga ugu weyn?
A: suuqeena ugu weyn waa Waqooyiga Ameerika iyo Koonfurta Ameerika, ANIGA, Ruushka, Afrika iyo Aasiya iwm.
S: Waa maxay warshadaha UHF RFID si baaxad leh hadda loo dabaqay?
A: UHF RFID si dhaqso ah ayay u soo koreysaa, RFID waa teknolojiyadda ugu weyn. ee IOT, sidaan ognahay waqtiga xogta weyn ayaa inoo imaanaya, UHF RFID waxay u isticmaashaa fursaddan inay si dhaqso leh u horumariso.
S: waa maxay habka lacag bixintaadu
A: T/T , Midowga Galbeedka , Paypal , Hubinta ganacsiga Cali
S: waa maxay dammaanaddaadu
A : dhammaan alaabtayada ayaa leh 1 dammaanad -sannadeedka haddii aadanuhu sababin
Wristband Bluetooth UHF RFID Akhrista Xararad VH-B73